Faah-faahin Sarkaal boliis ah oo Caawa lagu dilay Magaalada Muqdisho | Allbalcad Online
Home WARARKA Faah-faahin Sarkaal boliis ah oo Caawa lagu dilay Magaalada Muqdisho
Faah-faahin Sarkaal boliis ah oo Caawa lagu dilay Magaalada Muqdisho
Waxaa fiidnimadii Caawa taalada Daljirka daahsoon ee degmada Boondheere ee Gobolka Banaadir lagu dilay Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska dowladda Federaalka oo kamid ahaa Ciidamo ku sugnaa halkaas.
Askar ka tirsan Ciidanka dowladda ayaa la sheegay in Sarkaalka ay rasaas uga fakatay, taasi oo uga dhacday qeybaha sare ee jirkiisa, isla markaana uu goobta ku geeriyooday, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Ciidamo isla goobta joogta ayaa qaaday Meydka Saraalka la dilay oo ka tirsanaa Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya, isla markaana la sheegay inuu kamid ahaa Ciidamo joogay Daljirka daahsoon ee degmada Boondheere.
Warar la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Sarkaalka la dilay lagu magacaabi jiray Maxamuud Maxamed oo loo yaqaanay Abkoow Cambuure, waxaana baraha Bulshada harreeysay tacsi loo dirayo Marxuumka.
Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka ayaa waxaa sidaan oo kale loo dilay Saraakiil iyo Askar ka tirsaneyd Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya, iyagoona ay dileen Askar kale oo rasaas uga fakatay.
Previous articleCumar C/Rashiid oo ku baaqay in guddi loo saaro Shaqaaqooyinkii ka dhacay Muqdisho
Next articleMadaxweynaha Qoor Qoor oo Soo gaaray Magaalada muqdisho